वजन लागि उपवास दिन कसरी बनाउने
सही कसरी उपवास दिन व्यवस्था गर्न, सुरु गर्न। किनभने यो अन्तिम परिणाम असर गर्छ। यहाँ, सबै कुरा महत्त्वपूर्ण र morale र छ शारीरिक फिटनेस, पहिले र पछि र राम्रो पोषण।
आफ्नो सुविधाजनक दिन चयन गर्नुहोस्। ती फलस्वरूप, चयन आत्म दिन hikes मा, रेस्टुरेन्ट वा जहाँ यो एक सन्तोषजनक भोजन ग्रहण छ अन्य घटनाहरु, भ्रमण गर्न अपेक्षा छैन जो को पूर्वसन्ध्या मा दिन हुनेछ, वा यसलाई पछि, र। तपाईं सधैं सक्रिय सप्ताहन्तमा मा आराम गर्दै भने, आदर्श यस्तो मंगलवार वा बुधवार रूपमा सप्ताह, दिन चयन गर्न हुनेछ।
व्यवस्था उपवास दिन वजन लागि प्रति महिना 14चोटि हुन सक्छ। तपाईं खाना बारे सोच बाट विचलित हुनेछ र परीक्षा हुनेछ भन्ने कुरा गरिरहेको यस दिन गरौं। आवेग खरीद गर्न छैन किराना पसल जाने छैन, र योजना नत्याग्ने छैन।
तपाईं त तपाईं थप नैतिक समर्थन लेनी चाहिए, यो दिनमा तपाईं साथ दिनु कसैलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। सँगै सधैं रमाइलो र सजिलो कार्य हटाउन।
दिन को सार के हो
वजन लागि उपवास दिन खपत खाना को मात्रा मा एक सीमा समावेश छ। सामान्य मा, यो मोनो-आहार गर्न धेरै समान छ, तर सामान्य मा शरीर को बहाली गर्न योगदान र सुधार छ जो हानिकारक, बरु केवल एक दिन, स्वास्थ्य।
दिन को उतराई समयमा, तपाईं चिया संग एकान्तरण, शुद्ध पानी प्रशस्त पिउने गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चीनी थप्न वा छैन, तपाईं अनुसार कार्य संग निर्णय। तपाईं वृद्धि रोक्न चाहनुहुन्छ वा तपाईं अलिकति वजन बन्द फेंक गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि तपाईं चीनी खान, तर सीमित परिमाणमा गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य अवस्थामा पूरै छोडिदेऊ गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सबैभन्दा प्रभावकारी उपवास दिन बाहिर, तपाईं 1-1.5 किलो स्याहार भने। कुनै पनि एक उत्पादन मात्र शुद्ध पानी पिउन हुनेछ। को छुट्टी को दिन को पूर्वसन्ध्या मा भोजन आधा साँझ 2/3 मा सामान्य आहार कम। उसलाई पछि, नास्ता र खाजाका लागि बिहान, सामान्य भाग को 2/3 खान्छन्।
तर दिनमा तपाईं सानो अंश खान पनि एक उत्पादन, यसलाई व्यर्थमा पारित गर्दैन। तपाईं भोक मार्न आवश्यक रूपमा धेरै खान प्रयास गर्न मुख्य कुरा। तपाईं खाली चिया पनि वैकल्पिक खानाको गर्न सक्छन् यो 50-100 ग्राम हरेक आधा घण्टा होस्।।
को उपवास दिन आहार मा कम क्यालोरी खाद्य पदार्थ खान गर्नुपर्छ - आहार र gippoallergennye। यी कम बोसो वा कम बोसो घरेलु पनिर, दही, खीरे, टमाटर, zucchini वा स्क्वास, गाजर, बीट समावेश गर्नुहोस्। अनाज additives बिना अनाज वा चामल लागि रहन सक्छ।
तपाईं मिठाई दिन धेरै गाह्रो हो भने सुकेको फल मा शेयर। तिनीहरूले मीठो, सुखद स्वाद हो र यो चिया लागि मिठाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। साथै, तिनीहरूले भिटामिन मा धनी छन् र थकान गर्न प्रमुख बिना तत्व पहिल्याउन, त्यसैले उपयुक्त स्तरमा महत्त्वपूर्ण तत्व को सन्तुलन कायम गर्न मद्दत। मान्छे अतिरिक्त वजन झुकाउ भएका, अझ राम्रो तिनीहरूलाई पनि साधारण दिनमा क्यान्डी, चकलेट र अन्य मिठाई प्रतिस्थापन गर्न। 1-2 महिना भित्र सुकेको फल पक्षमा अन्य मिठाई को एक तिरस्कार आनंद से छक्क हुन सक्छ।
को उपवास दिन आहार तपाईं अनाज गुच्छे खाना वा Icing बिना multizlakovye गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै छैनन् सुक्खा फारममा जस्तै, तर तपाईं कम बोसो दही तिनीहरूलाई भर्न सक्नुहुन्छ, तर दूध मनमोहक छैन।
हामी आशा गर्न सक्नुहुन्छ
नियमित उपवास दिन व्यवस्था, यो वजन विरुद्ध लड्न र निकै समग्र स्वास्थ्य सुधार, इच्छित आकार आफूलाई राख्न सजिलो छ।
दिन को ह्यान्डलिङ समयमा तपाईंलाई सजिलै 100 र 500 ग्राम बीच गुमाउन सक्छ। वजन, उचित प्रवेश निस्कन साथ। अर्डर परिणाम र यस्तो प्रत्येक दिनको लागि पछि वजन पकड मा, यो खेल साथी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
वैकल्पिक, आफूलाई लामो कसरत थकित। यसलाई नियमित गर्न सम्भव (2-3 पटक एक हप्ताको) छ, पूल वा विभिन्न मांसपेशी समूहहरूको लागि 5-6 अभ्यास प्रत्येक दिन गरिरहेको जानुहोस्।
Porridge मा आहार - प्रयोग के हो?
उहाँले फिर्ता गर्न आयो भनेर कसरी, पेट हटाउन?
हरियो क्लब (3 * होटल, सोची): फोटो र समीक्षा
Nil Geyman (नील Gaiman)। रचनात्मकता, फोटो
रुचि ती लागि निर्देशन: कसरी एक समूह VKontakte सिर्जना गर्न
होनोलुलु, जहाँ जो देश हो? जहाँ होनोलुलु मा आराम गर्न?
फिल्म "बादल एटलस": समीक्षा, अभिनेता, फिल्म को विवरण
आहार सलाद: चिकन को एक स्वादिष्ट पकवान लागि नुस्खा
कसरी घर मा फिर्ता दुखाइ को छुटकारा प्राप्त गर्न?